လမ်းပြကြယ်: မည်သူ့မှာ တာဝန်ရှိ သနည်း ?
မည်သူ့မှာ တာဝန်ရှိ သနည်း ?
၇.၁၁.၂၀၁၀ ရက်နေ့က ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ မြောက်ပိုင်း ခရိုင်၊ အင်းစိန် မြို့နယ်၊ အောင်ဆန်းမြို့ မဲရုံ အမှတ် ၆ တွင် အသက် မပြည့်သေးသူကို ဖေါ်ပြပါ ယာယီ မှတ်ပုံတင် သက်သေခံ လက်မှတ်ကို တာဝန်သိ ပြည်သူ တစ်ဦးမှ လာရောက် ပေးအပ်ထားသည်ကို ဓါတ်ပုံဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပြီး ဖေါ်ပြအပ်ပါသည် မဲပေးသူကိုလည်း ယင်းလက်မှတ်ဖြင့် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဝင်များက မဲပေးခိုင်းခဲ့ပါသည်။ မဲပေးပိုင်ခွင့် မရှိသူကို မဲပေးခိုင်ခြင်းသည် တရား ဥပဒေအရ အရေးယူရပါမည်။ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ ဆိုတာ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆပါသည်။ ၎င်း အဖြစ်အပျက်များ နေရာ တော်တော် များများတွင် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာမှ တရား ဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ မရှိကို စုံစမ်းမေးမြန်း ဖေါ်ထုတ် ပေးပါရန် တင်ပြ အပ်ပါသည်။
အသေးစိတ် အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ဦးတင်မောင်အေး 01 243633 ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။